I-intanethi ye-Fannan - I-Adobe Cottage Great Mountain View - I-Airbnb
I-intanethi ye-Fannan - I-Adobe Cottage Great Mountain View
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKonstantin
Zivumele ungene kwaye uphumle kwiKhaya elilula laseThai Village.
Yakha ukusuka kwi-adobe, ejikelezwe sisiqhamo kunye negadi yeti yezityalo.
Yonwabela nje umbono weNtaba yeChiang Dao ukusuka kwipatio okanye uhambe ngeendlela ezimfutshane zokukhwela isithuthuthu ukuya kwimithombo yethu eshushu, iitempile, umqolomba kunye neengxangxasi.
Eli likhaya elisisiseko. Ukuba ukujonga kwakho ukuphila ngokulula oku kukulungele wena. Indlu ihlala ngasemva kwegadi encotsheni yenduli. Inombono ongakholelekiyo wentaba yaseDoi Luang ukusuka kwindawo engaphandle. Igumbi lokuhlambela lisakhiwo sekhonkrithi ekhazimlisiweyo kwaye igumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala enziwe nge-adobe. Ikhuselwe yimithi emide kwaye iindonga zigcina indlu ye-Adobe ikhuselwe. Kukho iifeni ezifakwe kwiisilingi. Le ndlu ibucala kwaye undwendwe ngalunye lufumana yonke igadi kunye nendlu yonke. Kukho indawo yokupaka imoto enye. Igalelo elivela kumagcisa ahlala apho anika imvakalelo eyodwa kwaye isekhaya.
Indlu yokuhlambela inkulu kwaye ineshawari enamanzi ashushu kunye noxinzelelo oluhle lwamanzi.
Kukho amagumbi amabini okulala. Zombini ezinomandlalo wenkosi.
Indawo yekhitshi engaphandle inesitovu sombane esincinci. Kukho iketile, i-rice cooker, isinki, i-oveni encinci, iipleyiti kunye nezinto zokuthambisa. Ifriji enefriji ingaphakathi endlwini.
Isitiya sinemango evuthiweyo kunye neziqhamo (Juni-Julayi), i-longan (Agasti-Septemba) umthi wetamarind (Februwari-Matshi). Imifuno ikhula kwigadi yonke. Siphinde satyala ipapaya, icustard apple, icaimito, star fruit, igwava kunye nelychee (engekathwali). Zive ukhululekile ukuzinceda kuyo nantoni na esuka egadini.
Kukho iinkukhu ezizulazula ebumelwaneni kwaye ziya kukhwela ekuseni. (Yiza nezinto zokuvala indlebe ukuba awungomntu wasekuseni.)
Qhagamshelana nathi ngo:
- okanye Instagram
Ndizakuhlala ndikhona ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo kwaye ndikukhokele kumava akrwada, ongalibalekiyo kunye nohambo.
Iilwimi: 中文 (简体), English, Deutsch, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chiang Dao